Koh Lani na Gulf of Thailand nyere iwu ka ndị njem nleta niile pụọ
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Koh Lani na Gulf of Thailand nyere iwu ka ndị njem nleta niile pụọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • News • ndị mmadụ • Safety • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Koh Lani bụ paradaịs agwaetiti dị na Ọwara nke Thailand. Ọ bụ ebe njem nleta na-ewu ewu si Pattaya.
Na Sọnde, e nyere ndị njem nleta 100 nọ na paradaịs a mara mma iwu ka ha pụọ ​​n'ihi ikpe COVID-19.
Koh Lan bụ obere agwaetiti 161 sq kilomita na Ọwara nke Thailand. Agwaetiti a bụ paradaịs ma mara ama maka osimiri ya, nke edobere na mpaghara ugwu ugwu. N'ebe ugwu, osimiri Ta Waen nwere ọtụtụ ụlọ nri na ụlọ ahịa. Nnukwu ụlọ nwere ụdị ụkwụ na-achị nsọtụ ugwu ugwu. A na-ama osimiri ahụ maka mmiri ya doro anya na ọdịda anyanwụ. Monmụ obere enwe bi n’ugwu ndị gbara okirikiri Nual Beach gburugburu, n’ebe ndịda.
Ndị njem nleta hụrụ agwaetiti ahụ n'anya. Ihe a niile na - akwụsị dị ka ọ dị taa.
A gwara ihe dị ka ndị njem 100 fọdụrụ na paradaịs agwaetiti ahụ ka ha hapụ Koh Lan na mpaghara Bang Lamung, n'ihi na etinyela agwaetiti ahụ n'okpuru mkpọchi mpaghara malite taa ruo Jan 20.
Mkpọchi ahụ, nke kọmitii Covid-19 nke agwaetiti ahụ kwupụtara na mgbede Sọnde, bịara mgbe achọpụtara na mmadụ nwere ọrịa na Bali Hai pier, ebe ọrụ ụgbọ mmiri na-ejikọ Pattaya na Koh Lan.
Honlọ ọrụ ahụike ọha na eze Chon Buri rịọkwara ndị mere njem n'etiti Pattaya na Koh Lan site na Bali Hai pier n'etiti Dec 18-31 iji lelee ahụ ike ha anya.
Nkwupụta ahụ chọrọ ndị ọrụ nke ebe obibi na ebe ntụrụndụ iji kpochapụ ndị njem niile site na ụnyaahụ ma gbochie ha ịnakwere ndị ọbịa ọhụrụ ruo mgbe edozi ọnọdụ ahụ.